October 17, 2020 - Padaethar
October 18, 2020 October 17, 2020 by Padaethar
ယောက်ျားလေး တွေရဲ့ လက်မအနေအထားက ပြောပြတဲ့ အချစ်စိတ်ထား လက်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူသယောင် ရှိပေမယ့် သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွဲပြားပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ လက်မမှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်း၊ အရစ်ကြောင်းလေးတွေကလည်း … သူတို့ရဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော်ပြပေးနိုင်တာကြောင့် ဖတ်ကြည့်ဦးနော်… ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြာင်းလေးဟာ (A) ပုံစံအတိုင်း လက်မရဲ့ ပထမအရစ်အရှည်က ဒုတိယအရစ်ထက် ပိုရှည်တယ်ဆိုရင် … သစ္စာတရား ကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်ပြီး လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွဲဖော်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကို ချစ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြောင်းလေးဟာ (B) အတိုင်း … Read more
October 17, 2020 by Padaethar
၁။ သူအနားမှာရှိနေရရင် ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေသလို အရမ်းပျော်နေမိတယ်။ ၂။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ သေချာဂရုစိုက်ပေးနေမိတယ်။ ၃။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်ပူမယ်၊ သူဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲပေါ့။ ၄။ သူနဲ့စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတိုင်း တစ်လောကလုံးက ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားသလိုမျိုး ခံစားနေရတတ်တယ်။ ၅။ ကိုယ့်ချစ်သူမှားမှားမှန်မှန် သူ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးနေတတ်တယ်။ ၆။ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တိုင်းလဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ပာိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်ခံစားနေတတ်ကြတယ်။ ၇။ သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ခွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင် ကိုယ့်က ဖေးဖကူညီပေးနေမိတယ်။ ၈။ သူများအတွက် သူက ဘာမှမပာုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ…ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးသော လူတစ်ယောက်အဖြစ် လက်ခံထားကြတယ်။ ၉။ သူ့အပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ပေးပြီး သာယာတဲ့အချစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေတတ်ကြတယ်။momolay unicode ၁။ သူအနားမှာရှိနရေရငျ … Read more
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အရင်းနှီးဆုံး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ပြနေတဲ့ အပြုအမူ (၇) ခု သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရာရာကို လက်ခံသွားနိုင်ပါပြီ။အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေ လုံးဝကွာကျပြီး ကိုယ်အစစ်အမှန်ကို လက်ခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အနမ်း ချစ်သူနဲ့ တွေ့မှာမို့လို့ သွားသေချာတိုက်၊ ပီကေတွေစား၊ ချိုချဉ်တွေ စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်နေကုန် စားချင်တာစားပြီး နမ်းလိုက်တဲ့အနမ်းမျိုး၊ အိပ်ရာထ အနမ်းမျိုးတွေကကတောင် ရင်ခုန်မှုပေးနေဆဲပါပဲ။ ၂။ အော့အန်ချိန်lover ဘယ်လောက်ပဲ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ် အန်ပြီးစအချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုမှ သဘောကျစရာမရှိပါဘူး။ သူနဲ့အတူ သောကြာညအတူစားသောက်ပြီး လူမှန်းသူမှန်းမသိ မူးပြီး ….. အော့အန်ပြီးတာတောင် ကိုယ်ဟာ သူ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတုန်းဖြစ်သလို သူကလည်း ကိုယ့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၃။ လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်လေးကျင့်ခန်းလုပ် မပြင်မဆင်ထားတဲ့ ပုံစံကို မြင်တွေ့ရတာထက် … Read more
”နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး
”နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး ကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး ကားပေါ်မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ ကောင်မလေး အတူတူဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံး ဝင်းဝင်းလေးကို မမြင် မြင်အောင်ပြတယ် …။ အဲဒီမှာ လူပျိူကြီးက အတင့်ရဲပြီး …” နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ” ဆိုတော့ …. ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံကို တခါတည်းတောင်းပြီးစကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ် …။ နောက် …ညု တုတုနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက ” ရှင် နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင် ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာ ပြမယ် “ ” ဟာ ” …. လူပျိူကြီး တံတွေးသီးသွားပြီး ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကိုလည်း လျှောလျှောလျူ … Read more
”နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး ကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး
”နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး ကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး ကားပေါ်မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ ကောင်မလေး အတူတူဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံး ဝင်းဝင်းလေးကို မမြင် မြင်အောင်ပြတယ် …။ အဲဒီမှာ လူပျိူကြီးက အတင့်ရဲပြီး …” နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ” ဆိုတော့ …. ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံကို တခါတည်းတောင်းပြီးစကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ် …။ နောက် …ညု တုတုနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက ” ရှင် နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင် … ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာ ပြမယ် “ ” ဟာ ” …. လူပျိူကြီး တံတွေးသီးသွားပြီး ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကိုလည်း … Read more
လိပ်ပြာလေး ဘယ်ပန်းမှာ နားမလဲရွေးပြီး သင့်အချစ်ရေးအကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါ
လိပ်ပြာလေး ဘယ်ပန်းမှာ နားမလဲရွေးပြီး သင့်အချစ်ရေးအကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါ… သင်က လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ပေါ့…။ ဝဲကာ ဝဲကာနဲ့ ပန်းလေးတွေ ပွင့်လန်းရာကို ရောက်ရှိသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပန်းလေးတွေက အရောင်မတူ၊ အဆင်းမတူ၊ အလှနဲ့ သင်းရနံ့တွေ ကွဲပြားကြပါတယ်။ သင့် အနေနဲ့ ဘယ်ပန်းမှာ ခိုနာမလဲ…။ ဒီစမ်းသပ်ချက်လေးနဲ့ သင့် အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားတစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဆန်းကြည့်လိုက်ရအောင်…။ ကဲ ဘယ်ပန်းလေးကို ဓာတ်ကျပါသလဲ… (A) သင်က relationship တစ်ခုထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်ဆို ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်။ အကြောင်းမဲ့သက်သက်ကြီး ချစ်မှုရေးရာတွေကို စွဲလမ်းနေတဲ့ သူမဟုတ်ဘဲ ချစ်နေရရုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် စပရှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ရှိနေရတဲ့အခါမှာ စိတ်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပြီး ပိုပျော်ရွှင်တယ်။ ချစ်သူနဲ့ဆိုအရာကိစ္စ အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ … Read more
ယောကျာ်းလေးတွေလုံးဝထုတ်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ သူတို့စိတ်ထဲက အမှန်တရား(၇)ခု
ယောကျာ်းလေးတွေလုံးဝထုတ်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ သူတို့စိတ်ထဲက အမှန်တရား(၇)ခု ယောကျာ်းလေးတွေအကြောင်း မိန်းကလေးတွေက သိလှပြီလို့ထင်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ မသိသေးတဲ့ အရာတွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ ဒီအရာတွေက သူတို့တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း မသိနိုင်သေးတဲ့ အရာတွေပါ။ (1) ကျန်းမာတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံမျိုးကို ပိုသဘောကျတတ်တယ် ယောကျာ်းလေးတွေက မိန်းကလေးပုံစံတွေထဲမှာ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ပုံပေါ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ပိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ပျော့တိပျော့ဖတ် မိန်းကလေးမျိုးထက် နည်းနည်း ကြံခိုင်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံမျိုးကို သဘောကျတတ်ကြတာပါ။ နောက်ပြီး ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် မိန်းကလေးတွေထက် ရှိသင့်တဲ့ ဝိတ်မျိုးရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပြည့်ပြည့်နဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ပိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ (2) ယောကျာ်းတွေက တူညီတဲ့ အရာမျိုးကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ် လေ့လာချက်တွေအရ ယောကျာ်းလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာမျိုးကို … Read more
ကြီးပွား ချမ်းသာနိုင်မည့် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား… ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မည့်နှစ် ကဲပါဗျာ…အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲနဲ့ ပူပင်သောကတွေ ရောက်နေတဲ့ သူတွေအတွက် …၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းတွေ ပွင့်လန်းပြီး မိမိတို့အတွက် ကြီးပွားချမ်းသာစေနိုင့်မယ့် အသက်အပိုင်းအခြားလေးတွေကို ကြိုတင် တွက်ချက်ပြီး သိရှိကာ မလျှော့သောဇွဲလုံ့လတွေနဲ့ စိတ်ခွန်အားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ …၊ ဆရာက မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးအတွက် ကြီးပွားချမ်းသာ နိုင်မည့် လောကဓံ အကောင်းခွင်အသက်အပိုင်းတွေကို ကြိုတင် တွက်ချက်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ” မိမိအသက်ကို တည်ပြီး(၈)နဲ့ စားပါ …။ အကြွင်း = ၀၊ ၁၊ ၂ တနင်္လာ သားသမီးများ” အသက်ကို တည်ပြီး (၈)နဲ့ စားပါ …။ အကြွင်း = ၀၊ … Read more
ကိုယ့်ကိုထားသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် လွမ်းနေရင် ဒါတွေလုပ်ပါ
ကိုယ့်ကိုထားသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် လွမ်းနေရင် ဒါတွေလုပ်ပြီး မေ့ပစ်ပါ… ကိုယ့်ဘေးနားမှာ မရှိတော့တဲ့သူတစ်ယောက်၊ ကိုယ့်ကို ထားသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင်လွမ်းနေတတ်ကြတယ်။ အဲ့လိုအချိန်တွေက ခံစားရဆုံးပါ။ သတိရလွန်းလို့ ငိုမိရင်လည်း ငိုမိမယ်။ ဒီအချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော် …။ အိမ်မှာချည်းပဲ မနေပါနဲ့…. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိရနေတာက အိမ်မှာပဲ တံခါးလော့ချပြီးနေနေလို့ပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အပြင်လောကနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားတာပါပဲ။ အိမ်မှာနေနေရင် ပိုပြီးသတိရတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိမရအောင်ဆိုရင် အပြင်ထွက်ပေး၊ GYM ဆော့ပေးပါ။ အိမ်မှာပဲနေလိုက်ရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိရစိတ်က ပိုပြီး တိုးလာရုံပဲ ရှိပါတယ် …။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူရှိနေပါ…. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် သတိရနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူရှိနေလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သင်အတွက် … Read more
ကိုယ့်ကိုထားသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင် လွမ်းနေရင် ဒါတွေလုပ်ပါ…